मैक OSX – LINKSYS वायरलेस घर ROUTER कन्फिगरेसन
November 27, 2018 by व्यवस्थापक LeaveaComment
विशिष्ट मोडेल र कन्फिगरेसन तल देखाइएको जो DoIT Techstore मा बेचिएको छ लागि linksys WRT54G राउटर लागि हो (LINKSYS WRT54G)
थप जानकारी लागि linksys देखि उपलब्ध छ’ मा वेबसाइट: www.linksys.com
हार्डवेयर स्थापना शुल्क
कि यो साथ निर्देशन पछ्याएर आफ्नो राउटर सेटअप. यो राउटर अनप्याक समावेश, एक पर्खाल सकेट यसलाई plugging र आपूर्ति केबल प्रयोग गरेर आफ्नो डीएसएल वा केबल मोडेम यसलाई जडान गर्न.
सजिलो कन्फिगरेसन को उद्देश्यका लागि, यो अत्यधिक तपाईं एक इथरनेट केबल प्रयोग र तपाईं सीधा राउटर गर्न प्रयोग गरिनेछ कम्प्युटर जडान सिफारिस गरिएको छ. तपाईं सेटिङहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र राउटर बचत गर्नुहोस् जब यो कुरा सजिलो बनाउँछ. तपाईंले अस्थायी रूपमा बस कन्फिगरेसन लागि आपूर्ति इथरनेट केबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. को को एक आफ्नो कम्प्युटरमा इथरनेट पोर्ट देखि केबल चलाउन निश्चित हुन4रूटर पछाडि संख्यात्मक बंदरगाहों, र स्विच 'इन्टरनेट' लेबल.
म्याक नोट: Do not install the software from of the CD that comes in the box. यो बेवास्ता गर्न गाह्रो छ किनभने लागि linksys भन्छ जो तिमी चाहिए 'रन सीडी पहिलो' रूटर को पछाडि बंदरगाहों माथि स्टिकर राख्न आफ्नो बाटो बाहिर जान्छ. तथापि, त्यहाँ मा सफ्टवेयर म्याकिन्टस मिसिन लागि आवश्यक छैन.
रूटर को पछाडि संख्यात्मक बंदरगाहों को एक रूटर अप powering र आफ्नो कम्प्युटरको इथरनेट पोर्ट देखि एक इथरनेट केबल चलिरहेको पछि, वेब ब्राउजर सुरु र टाइप “http://192.168.1.1” स्थान क्षेत्रमा. त्यसपछि 'रिटर्न प्रेस’ प्रमुख.
तपाईं राउटर लागि प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड संग लगिन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ. पूर्वनिर्धारित, LINKSYS routers कुनै प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड 'व्यवस्थापक' हुनुको सेट आउन. तपाईं मा 'नाम केहि प्रविष्ट गर्नुपर्छ’ क्षेत्र. कि खाली छोड्नुहोस् र टाइप 'व्यवस्थापक’ 'पासवर्ड मा’ क्षेत्र र प्रेस 'लग इन’ प्रमुख.
लग इन पछि, तपाईं मूल सेटअप पृष्ठ देख्नुहुने. यो एक राउटर नाम लागि क्षेत्रहरू तपाईंलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, होस्टनाम, डोमेन नाम पनि IP ठेगाना जानकारी. तपाईं लागि रूटर नाम बाहेक यी कुराहरू कुनै समायोजन गर्न आवश्यक छैन. के तपाईं गर्न अर्थमा बनाउँछ कि यस क्षेत्र मा केहि टाइप गर्नुपर्छ. नोट, यो वायरलेस पहुँचका लागि प्रसारण गरिने नाम होइन.
आफ्नो राउटर लागि नाम प्रविष्ट पछि, make sure you click the सेटिङहरू बचत button on the bottom of the page. तपाईं यसो गर्नु अघि आफ्नो ब्राउजर अन्त्य भने, सबै परिवर्तनहरू हराउनेछ.
Click on the वायरलेस tab at the top of the page to bring up the ‘Basic Wireless Settings’ मेनु. तपाईं यहाँ प्रविष्ट गर्न आवश्यक मुख्य कुरा 'वायरलेस नेटवर्क नाम छ (SSID).’ यो तपाईंको वायरलेस ग्राहकहरु के प्रसारण गरिनेछ छ. तपाईं आफ्नो वायरलेस राउटर पहुँच तपाईं चाहनुहुन्छ र अरूलाई अर्थमा गर्नेछ भन्ने कुरा छान्नुहोस्. Make sure again to click the सेटिङहरू बचत button after typing in your chosen name.
यो बिन्दुमा तपाईं आफ्नो कन्फिगरेसन अन्त र आफ्नो वायरलेस राउटर प्रयोग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो नेटवर्क को वायरलेस भागमा पासवर्ड सक्षम हामी कडा प्रोत्साहन. त्यसो गर्न, you will next need to click on the वायरलेस सुरक्षा tab. Macs र Windows आधारित मिसिन उपयुक्त हुन, तपाईं 'सुरक्षा मोड सेट गर्नुपर्छ’ WPA व्यक्तिगत गर्न प्रयोग TKIP अल्गोरिदम. को पासवर्ड टाइप कम्तिमा 8 वर्ण र 'समूह प्रमुख नविकरण छोड्न’ पूर्वनिर्धारित रूपमा क्षेत्र. यी विकल्पहरू छनौट पछि, make sure you click the सेटिङहरू बचत button at the bottom.
तपाईं आफ्नो राउटरमा वायरलेस सुरक्षा सक्षम पूरा गरेको छ. यो अत्यधिक तपाईं 'बाट व्यवस्थापक राउटर लागि पूर्वनिर्धारित पासवर्ड परिवर्तन सिफारिस गरिएको छ’ तपाईंको छनौट को कुरा ह्याकरहरूलाई तपाईँको राउटर सजिलै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छैन. यो के गर्न, go to the प्रशासन tab at the top of the configuration page for your router. तपाईं नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्न क्षेत्रहरू देख्नुहुने (दुई पटक) and then again make sure to click सेटिङहरू बचत.
आफ्नो वायरलेस नेटवर्क मा प्रवेश
यो पछिल्लो खण्ड मा प्रवेश र आफ्नो वायरलेस राउटर मार्फत इन्टरनेट पहुँच माध्यमले तपाईंलाई चलाउँछ.
सुरु गर्न, निश्चित छ कि तपाईंले माथि प्रारम्भिक कन्फिगरेसन लागि राउटर प्रदान इथरनेट केबल प्रयोग भने, तपाईं केबल अनप्लग र आफ्नो डीएसएल वा केबल मोडेम को पछाडि मा एक अन्त प्लग कि (वा अन्य इन्टरनेट जडान) को 'इन्टरनेट मा र एक अन्त’ तपाईंको राउटरमा पोर्ट. यो तपाईंको राउटर कुनै आफ्नो इन्टरनेट जडान साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ र सबै मिसिन आफ्नो राउटर कुरा, कि इथरनेट वा वायरलेस मार्फत. सम्झौता तल म्याक ओएस एक्स संग सूचीबद्ध विशिष्ट कदम, तर Windows मिसिन पनि आफ्नो राउटर तार पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंको वायरलेस पहुँच बिन्दु रूपमा आफ्नो राउटर चयन. माथिल्लो दायाँ हात एक बिन्दु को बाहिर आ वायरलेस छालहरू जस्तै देखिन्छ कि तपाईंको म्याक को कुनामा आइकनमा क्लिक. यो क्लिक गर्नुहोस् र हवाई अड्डा बन्द निश्चित (हवाई अड्डा: तल उदाहरण चित्रमा जस्तै खैरो हुनुपर्छ).
सूचीबद्ध उपलब्ध वायरलेस पहुँच अंक हेर्न र सूचीमा आफ्नो राउटर फेला. 'विज्ञापन’ माथिको उदाहरण बाट एक. निश्चित यसलाई हाइलाइट र यसलाई चयन गर्न नाममा क्लिक गर्नुहोस्.
जब तपाईं आफ्नो पहुँच बिन्दु मा क्लिक, तपाईं एक WPA व्यक्तिगत पासवर्ड प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ. पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् तपाईँले पहिले आफ्नो वायरलेस सुरक्षाको लागि कन्फिगर गरिएको.
अब तपाईं इन्टरनेटमा बिना तार जडान भएको हुनुपर्छ. आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर अप खोल्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँको जडान परीक्षण.
192.168.l.254 आईपी ठेगाना - पूर्वनिर्धारित रूटर व्यवस्थापक & लग इन पासवर्ड
आईपी ​​ठेगाना 192.168.1.254 अर्थ जो यो एक निश्चित दायरा निजी दायरा रूपमा IANA देखि सुरक्षित छ जो सम्म फिट हुनेछ एक निजी आईपी ठेगाना हो. साधारणतया, हामी नयाँ राउटर वा मोडेम खरिद गर्दा तिनीहरूले प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रदान. This username and … [Continue reading] about 192.168.l.254 IP Address – Default Router Admin & लग इन पासवर्ड
192.168.0.1 लग इन आईडी & पासवर्ड– 192.168. को. 1 सेटिङहरू
प्रत्येक ग्याजेट वेब जोडिएको छ जो निश्चित IP ठेगाना हुनेछ. आईपी ​​ठेगाना इन्टरनेट प्रक्रिया ठेगाना रूपमा उल्लेख गरिएको छ हरेक एक उपकरण लागि, त्यहाँ आईपी को एक नम्बर जस्तै सार्वजनिक साथै व्यक्तिगत ठेगाना रूपमा सम्बोधन छन्. There … [Continue reading] about 192.168.0.1 लग इन आईडी & पासवर्ड– 192.168. को. 1 सेटिङहरू
192.168.1.1 लग इन पृष्ठ, प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र वायरलेस सेटिङहरू
November 26, 2018 by व्यवस्थापक LeaveaComment
आईपी ​​ठेगाना कारणहरू verities लागि प्रयोग गरिन्छ. मुख्यतया आईपी ठेगाना राउटर मा लग गर्न आवश्यक छ, प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड पनि राउटर गर्न लगइन लागि IP ठेगाना संग आवश्यक हो. आईपी ​​ठेगाना 192.168.1.1 isaPrivate IP address and … [Continue reading] about 192.168.1.1 लग इन पृष्ठ, प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र वायरलेस सेटिङहरू